बिन्ति छ, हामीलाई देश भित्र आउन देउ, हामीलाई पराई भूमिमा म’र्न नदेउ ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/बिन्ति छ, हामीलाई देश भित्र आउन देउ, हामीलाई पराई भूमिमा म’र्न नदेउ !
बिन्ति छ, हामीलाई देश भित्र आउन देउ, हामीलाई पराई भूमिमा म’र्न नदेउ !
काठमाडौं । रातीको १२ : ३० बजेको छ । भारतको उत्तरा खण्डको रुद्रपुरको सडकमा खुला आकाश मुन्तिर सयौं नेपाली लखतरान भएर प’ल्टिएका छन् । न उनीहरुले खान पाएका छन् । न त पानी नै । उनीहरु रुद्रपुर बाट ९० किमी हिडेर शुक्रवार राति खटिमा हुदै कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाको बाबाथान पुगे ।
त्यहाँबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने क्रममा भारतीय एसएसवीले उनीहरुलाई कु’टपिट गरेर लखे’ट्यो । उनीहरु त्यहाँबाट बनबासा पुगे ।त्यहाँबाट पनि उनी पैदल हिडेर फेरि खटिमा पुगे । यसरी तीन दिन लगातार हिडेका उनीहरुलाई शनिवार दिउसो काँग्रेस आईका उत्तर प्रदेशका महासचिव भुवन कापडीको नेतृत्वमा खाना र पानीको व्यवस्था भयो । महिना दिनपछि एकसाथ पानी र खाना पाएको यो पहिलो पटक थियो ।
दिनभरी त्यहाँबाट नेपाल फर्किने आसमा बसेका उनीहरुलाई राति भारतीय प्रहरीले बसमा कोच्यो । ४० जना अट्ने क्षमता भएको एउटै बसमा ९०÷९० जना राखेर बस हुईकियो । उनीहरुलाई प्रहरीले कहाँ लैजादै छ भन्ने सम्म जानकारी थिएन । साढे ११ बजे बस रुद्रपुरमा रोकियो । र उनीहरुलाई सडकमा झारेर बस फर्कियो । पश्चिम टुडेमा खबर छ
यो त्यही ठाउँ थियो, जहाँ उनीहरुले झण्डै एक महिना बढि क्वारेन्टाईनमा बिताएका थिए । त्यसपछि उनीहरुलाई त्यहाँको प्रहरीले निकालेर बाहिर पठाएको थियो । तर त्यहाँ बाट हिडेर तीन दिनमा नेपालको सीमाना टेकेका उनीहरु सीमाना बाट फिर्ता गरेर, फेरि रुद्रपुर पु¥याइए । भोक र निरन्तरको हिडाईले अत्यन्त गलेका उनीहरु एक पाईला पनि हिड्न सक्ने अवस्थामा थिएनन ।
उनीहरु कोही रोईरहेका थिए । कोही झो’क्राईरहेका थिए । कोही त भोक र थकानले बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएनन। हामी भित्रैबाट टुटीसक्यौ । अव त सामूहिक रुपमा म’र्नु बाहेक हामीसंग कुनै उपाय छैन, डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिका–४ कुर्मुल्लेका सुशिल जोशी यो भनिरहदा भक्कानिरहेका थिए । उनी राम्रोसंग बोल्न समेत सकिरहेका थिएनन ।
हामीलाई बचाई दिनुप¥यो, हामी बाँच्न चाहन्छौ । उनी एकोहोरो यसो भनिरहदा छेउमा उनीसंगै रहेका उनका अरु साथीहरु पनि केन्द्रीय सरकारलाई हाम्रो समस्या सुनाई दिनुहोस । हाम्रा लागि महाकाली पुलका ढोका खोलिदिन सरकारसंग हामी बिन्ति गर्छौ। भार तीय प्रहरीले एक ठाउँबाट लखेटेर अर्को ठाउँ पु¥याउछ । कतिखेर कहाँ पु¥याउछ थाह छैन । जोशी सुनाउदै थिए, न हामीले केही खान पाएका छौ ।
न त सुत्न । यति दिन त यसैगरी बाँच्यौ । अब त थाकिसक्यौ । गलिसक्यौ । भित्रैबाट टु’टीसक्यौ । अव पनि नेपाल प्रवेश गर्न नपाए सामूहिक रुपमा यही म’र्छौ। जोशीले रुद्रपुरमा यसरी भो’कभोकै बिचल्लीमा पर्ने नेपालीको संख्या सात सय बढि रहेको सुनाए । उनी आफ्नै देशको सरकारले नहेरेका कारण भारतीय सरकारले पनि हेपेको जोशीले गुनासो गरे ।
नेपाल सरकारसंग उनले आग्रह गर्दै भने, कि हामीलाई नागरिक होईन भनिदेउ । कि हाम्रा लागि महाकालीको पुलको ढोका खोली देउ । हामी मर्नै परे, आफ्नै देशमा म’र्न चाहन्छौ । पराई भूमिमा हामीलाई म’र्न नदेउ । उनीहरु सरकारले जति दिन क्वारेन्टाईन मा बस्न तयार रहेको सुनाउछन् । भन्छन्, सरकारले जे जे भन्छ, त्यही मान्छौ । बिन्ति छ, हामीले देशभित्र आउन देउ ।
भर्खरै पोखरामा ड’रलाग्दो कार दु’र्घटना, एकको मृ’त्यु, ४ घा’इते (नामावली सहित )
नेपालमा कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या ३५ पुग्यो